Dibanisa ivawutsha, ikhuphoni, kunye nezisombululo zekhowudi yesaphulelo | Martech Zone
Dibanisa ivawutsha, ikhuphoni, kunye nezisombululo zekhowudi yesaphulelo
NgoLwesihlanu, Julayi 15, 2016 NgoMvulo, Julayi 18, 2016 Douglas Karr
Iikhowudi zezaphulelo zezona ndlela zilungileyo zokuhenda undwendwe lwakho ukuba luvale. Nokuba sisaphulelo esikhulu okanye ukuhambisa simahla nje, isaphulelo sinokuwenza wonke umahluko. Kwixesha elidlulileyo, sizakhele sisebenzisa iifonti zebhakhowudi emva koko sizilandelela kwidilesi ye-imeyile. Akuzange kube mnandi… ngakumbi wakuba udibanise ukuhlangulwa kokuhlawulelwa okuninzi, ukwabelana ngekhowudi, njl. Njl. Ukongeza, iifonti zisebenze kakhulu kwi-Intanethi, kodwa kuye kwafuneka sakhe umfanekiso wazo ngamandla kwi-imeyile.
Iivawutsha, isaphulelo kunye neekhowudi zekhuphoni zihlala zixhatshazwa, ngenxa yoko iqonga lokulandelela kubalulekile. Iinkqubo ezimbini kutshanje kuxoxwe ngazo kwifayile ye- iqonga le-imeyile Ndingowakwa:
iVoucher-Iqonga lokuThengisa ngeVawutsha
iVoucher ikuvumela ukuba ulawule ngokupheleleyo kwaye usebenzise yonke ivawutsha, isigqebhezana kunye neekhowudi zezaphulelo kwiqonga elinye, elibanjiweyo.
Yenza iivawutsha -Yakha iivawutsha ezinomtsalane ezilungiselelwe ngokuzenzekelayo i-imeyile, iwebhu, intlalontle kunye neselfowuni usebenzisa ujongano lomsebenzisi.
Papasha iivawutsha -Papasha iivawutsha kwiindlela ezininzi ngaxeshanye ukufezekisa ukufikelela okuphezulu.
Thatha idatha -Idatha ebanjiwe ngamaphepha okufika anophawu akuvumela ukuba ulawule ngokulula ubudlelwane babathengi ngaphakathi kweqonga.
Sebenzisa iivawutsha Sebenzisa iivawutsha ngokukhuselekileyo ngexesha langempela, kwi-intanethi nakwivenkile.
Ukubika Ukusebenza ngokugqibeleleyo kokunika ingxelo kuthetha ukuba ungabamba kwaye ulawule unxibelelwano nabathengi ngeevawutsha zakho.
Ivawutsha-yeNtengiso yeVoucher API
Kwabo bafuna ukuvelisa isisombululo esomeleleyo kwaye basidibanise ngaphakathi, Qinisekisa unikezela ngamandla API ukungena, ukulandelela, kunye nokukhulula iikhowudi zekhuphoni kuwo nawuphi na umthombo.
Nge-REST API yazo, iikhowudi zinokudityaniswa kwiiwebhusayithi (kwicala labathengi i-JS SDK, voucherify widget checkout), ii -apps zeselfowuni (i-Android kunye ne-iOS SDKs), okanye isiphelo esingasemva (i-PHP, iRuby, iNode.js, iiJava SDKs, iNode app.) yeqonga lakho. Ii-SDK ezomeleleyo zonke ziyafumaneka.
Cofa uze wenze umboniso ophilayo:
Fumana ityala leXESHA eli-3 leVAKHAYA!
tags: Apiikhuphoni apiiikhowudi zekhuphoniintlawulelo yekhuphoniIikhowudi zezaphuleloIikhowudi zekhuphoni zeposiIikhowudi zesaphulelo se-mailchimpukukhululwaintlawulelo ngentlawuleloInkqubo yevawutshaqinisekisa
Unxibelelwano olubonakalayo luyavela kwindawo yokusebenzela
Jul 18, 2016 ngo-4: 16 AM
Molo Douglas, enkosi ngokusidwelisa. Abafundi beBlog yeMarketingTech banokufumana ikhowudi yokuthengisa ekhethekileyo yeenyanga ezi-3 zobhaliso lwasimahla lweVoucherify apha http://redeem.voucherify.io/marketingtech